Snapdragon 888 vaovao: endri-javatra sy famaritana | Androidsis
Ny chipset matanjaka indrindra amin'ny tontolo tontolo iainana Android dia eto, izay tonga hanala ny toeran'ny Snapdragon 865 -ary ny azy Plus variant- ho ilay nanolotra fampisehoana tsara indrindra. Raha ny fanontaniana dia miresaka momba izany isika Snapdragon 888, izay noheverina fa havoaka eny an-tsena amin'ny anaran'ny Snapdragon 875, saingy tsy nivadika izany. Toy izany koa, ity iray ity dia tonga miaraka amin'ny tsara indrindra ho biby izay hampitaovana ny havoana avo indrindra sy ny sainam-pirenena manomboka amin'ity volana ity sy mandritra ny taona 2021.
Ireo faritra izay ifantohan'ity chipset mpanamboatra ity indrindra, ankoatry ny fahombiazana amin'ny ankapobeny, dia ny an'ny sary, fifandraisana 5G sy lalao. Mahatalanjona ny kalitaony, ary eto izahay dia manasongadina ireo cores CPU vaovao izay soratantsika eto ambany, ankoatry ny zavatra hafa.
Qualcomm Snapdragon 888 endri-javatra sy ny famaritana ara-teknika
Ho an'ireo vao manomboka, ity sombin-tany vaovao ity na, antsoina hoe tsara kokoa, sehatra finday manana haben'ny 5 nm, izay ny fenitra vaovao izay tsy maintsy ho hitantsika matetika kokoa amin'ireo mpanamboatra chipset mahomby amin'ny ho avy. Io mari-trano io dia mamela ny fanjifana angovo ambany be kokoa noho ny an'ny nanometro avo lenta an'ny SoC, ka voakitika tsara ny fizakantena. Misy fiatraikany amin'ny haben'ny processeur koa, izay kely kokoa, ary ny hafainganam-pandehan'ny data, izay avo kokoa.
Miahiahy kely kokoa, fampisehoana sy fahombiazan'ny angovo dia mahatratra 25% ambony, raha oharina amin'ireo chipset Qualcomm teo alohany. Izany koa dia vokatry ny fanamafisam-peo fototra izay ireharehan'ny CPU, izay mizara ho clusters telo ary toy izao manaraka izao:
Ny core Cortex X1 dia niorina tamin'ny 2.84 GHz sy cache 1 L an'ny cache L2.
Ny atidoha Cortex A78 telo dia nahatratra 2.4 GHz niaraka tamin'ny cache 512 KB an'ny L2 (ho an'ny tsirairay).
Ny atidoha Quad Cortex A55 dia niorina tamin'ny 1.8 GHz niaraka tamin'ny 128 KB cache L2 (ho an'ny tsirairay).
Amin'izany dia tsy maintsy ampiana cache 4 L3 iraisana 3 MB ihany koa, ankoatry ny cache XNUMX cache an'ny processeur izay natokana manokana ho an'ny rafitra.
Snapdragon 888 maritrano
Etsy ankilany, amin'ny fanajana ny Adreno 660 GPU, izay motera sary an'ny Snapdragon 888, hoy i Qualcomm dia hatramin'ny 35% haingana kokoa noho ny SoC GPU teo alohany ary mandany herin'aratra 20% kely kokoa, izay manampy ny fizakantena ihany koa tsy handeha amin'ny tany. Raha ampiantsika amin'izany fa ny mpanamboatra semiconductor dia hanome azy ireo fanavaozana maharitra sy tsy miankina amin'ny processeur, azontsika atao fa miatrika GPU misy zavatra betsaka hatolotra antsika isika ary mandritra ny fotoana maharitra.
Tahaka ny nitranga tamin'ny Snapdragon 765G -ary tsy tamin'ny Snapdragon 865-, ny Snapdragon 888 vaovao dia tonga miaraka amina modem 5G, ka ny smartphone rehetra mitondra azy dia hifanaraka amin'ireo tamba-jotra 5G manerantany. Ny Snapdragon X60 5G no maodelim-pifidianana ho an'ny asa toy izany, ary iray izay, mazava ho azy, dia mifanaraka amin'ny tamba-jotra 2G, 3G ary 4G LTE, ary koa ireo safidy mifandraika mandroso toy ny Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E ary Bluetooth 5.2.
Ny motera AI an'ny Snapdragon 888 dia nomena anarana Hexagon 780, ary io no singa miandraikitra ny fanampiana ny fivezivezena moramora ny lahasa sy ny dingana rehetra mifandraika amin'ny Art intelligence, ny fandikana ary maro hafa. Izy io dia afaka manodina hatramin'ny 26 ny asa isan-tsegondra, izay mahatezitra amin'ny fampisehoana ary maneso ny asan'ny 15 tera isan-tsegondra izay tratran'ny Snapdragon 865. mamokatra kely, hoy i Qualcomm.
Miorina amin'ny sary, izay iray amin'ireo teboka mahaliana antsika rehetra indrindra, dia manana vaovao tsara manasongadina isika. Miaraka amin'ity sehatra finday ity, Ny fandraisam-peo horonan-tsary 8K dia efa napetraka ara-dalàna, izay efa hitanay fa nampiharina tamin'ny finday avo lenta amin'ity taona ity. Ny fandraketana horonantsary 4K, etsy ankilany, dia tena tsara kokoa, satria azo ampiharina miaraka amin'ny HDR miaraka amin'ny ISP (mpikirakira sary) Spectra 580 an'ny Snapdragon 888.
Eto koa Ny fandraisam-peo horonan-tsary 4K dia nohamafisina tamin'ny frame 120 isan-tsegondra, zavatra efa hitantsika koa taloha, fa izao dia mampanantena fa ho tsara kokoa sy marin-toerana kokoa noho ny tombotsoan'ny sehatra finday sy ny ISP Spectra 580. Mahaliana tokoa ny mahita ny fiantraikan'ireo fiasa sy fanatsarana rehetra ireo amin'ny fampiharana raha tonga amin'ny fakana sary, izay ho hitantsika tsy ho ela.
Ao amin'ny sehatry ny lalao, misy ny mifanentana amin'ny taha-tsofina avo lenta hatramin'ny 144 Hz, zavatra iray tena manan-danja indrindra amin'ny lalao battle royale, na dia mbola tsy misy aza ireo afaka miasa amin'ity taha vaovao ity, fa azo antoka fa mihoatra ny iray no hahazo fanavaozana ho an'ny Take tombony amin'ny fahombiazan'ny processeur ary manolotra traikefa filokana tsaratsara kokoa. Ary koa ny olana hafa toy ny faharetana sy ny valin'ny fikasihana dia namboarina; eto dia asongadinay izany ny valin'ny tactile dia hanatsara ny 10% amin'ny lalao 120fps, 15% amin'ny lalao 90fps, ary 20% amin'ny lalao 60fps.
Etsy ankilany, ny Snapdragon 888 koa dia manana processeur fiarovana azy manokana izay, raha ny filazan'ny mpanamboatra, dia hanara-maso ny fiainana manokana sy ny filaminana amin'ny fotoana rehetra, mba hanolorana encryption fatratra ho an'ny filaminan'ny mpampiasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Snapdragon 888 dia efa ofisialy ary tonga miaraka amin'ny hery lehibe ho an'ny faran'ny taona 2021